Somalia bu Adreesị izizi nke mba iku ume | RayHaber | raillynews
HomeỤWAAFRICA252 SomaliaSomalia bụ adreesị izizi nke mba iku ume ikuku
Somalia bụ adreesị izizi nke mba iku ume ikuku
03 / 05 / 2020 252 Somalia, AFRICA, ỤWA, General, coronavirus, Isi akụkọ, OGBU NIILE
adres izizi nke iku ume mba ofesi bu somalia
N'okpuru nhazi nke ulo oru ulo oru na teknụzụ, na nkwado nke Ministri Ahụike, a bidoro zigara ya mba ndị Baykar, Biosys, Arçelik na Aselsan mepụtara, ndị natara akara zuru oke n'aka ndị dibia mgbe nnwale gachara.
Somalia bụ adreesị izizi nke iku ume nke emepụtara na ụlọ ọrụ mba ofesi. Turkey koronavirüsl a ọhụrụ ụdị (Covidien-19) zitere ọgwụ na Somalia ebe ọtụtụ obodo, tinyere ọzụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ na-elekọta ume ngwa agha. Ngwa a kwadebere na ntuzi aka nke Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan ruru Somalia. Prime Minister Recep Tayyip Erdogan, Turkey banyere enyemaka zigara Somalia, "na-eku ume ngwaọrụ anyị nwere na National Technological itunanya ga eku ume anyị Somali ụmụnna." hụrụ na nkọwa. N'ikwupụta oge ndị ahụ siri ike na-akụziri mba anyị ka ha tụkwasị obi, Mustafa Varank, Minister nke Mmepụta na Nkà na Technologyzụ kwuru, “Anyị na-ahụ ihe ịga nke ọma nke National Technology Movement anyị malitere site na onye isi Onye isi anyị. Turkey ga-eku ume anyị Somali ụmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị, "ka o kwuru.
NSOGBU NKE OMA BIRI KWES SOMALRI N’ANYA N’IRI EGO
Turkey, a ọhụrụ ụdị coronavirus (Covidien-19) zitere ọgwụ na Somalia, ebe na-eku ume ngwa ọgụ ihe ọrịa n'etiti ụmụ amaala kpụ ọkụ n'ọnụ na-elekọta. Ya mere, mba mbu nke mba mbu ebe ndi nlebara anya nke ulo, nke bidoro oke onwa n’ime ubochi iri n’abuo nke oru ndi ulo oru na teknụzụ zigara, bụ Somalia, ebe a matara na enweghi ndị na-ebugharị mmiri.
ANYA ANYA GIRI EGO
N'ime ntuzi aka nke Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan, ihe ndị Ministry nke National Defense, Ahụike, Mmepụta na Teknụzụ kwadebere n'ụgbọelu ụdị 400M n'ọdụ ụgbọ elu Etimesgut.
A na-etinye usoro LVLANA MEVLANA
N’elu ụgbọelu ahụ, enwere ngwa ọgụ ọgwụ mgbochi 5 dịka Kit Kit, overalls na mask site n’aka ndị na-ahụ maka iku ume na mpaghara, nke emepụtara na ọkwa mbụ, puku mmadụ ise. Presidential pennant na Turkey na Turkish n'akụkụ Somalia na Somali ọkọlọtọ nakwa dị ka Mevlana, "E nwere olileanya n'ofè obi nkoropụ mma. E nwere ọtụtụ anyanwụ n'azụ ọchịchịrị. ” Tookgbọelu ahụ kwụsịrị mgbe e kwusịrị ihe enyemaka ndị ahụ.
“CKPIVR IS ANYA NSỌ, Ọ B A V ,CDAN IHE Ọ B A”
Onye isi ala, Erdoğan, na posta ya na akaụntụ Twitter ya, kwuru, sị: “Ngwaọrụ iku ume anyị mepụtara na National Technology Move ga-eku ume ụmụnna anyị nọ na Somalia. Mgbazi abụghị ajụjụ, ọ bụ okwu metụtara akọ na uche. Ohere na akọ na uche nke obodo anyị dịnyere ndị a na-emegbu emegbu na ndị nọ na mkpa. Aziz Millim, enwere osisi ụgbọ elu akpọrọ obi gị. " iji okwu.
“ANY Witness Na-agbasi mbọ ike”
Onye na-ahụ maka ụlọ ọrụ na teknụzụ, Mustafa Varank kesara na akaụntụ Twitter ya, “Oge ihe siri ike kụziiri mba anyị ịtụkwasị obi na mmụọ nsọ ya. Anyị na-ahụ arụmọrụ nke National Technology Move, nke anyị malitere n'okpuru ọchịchị Onye isi anyị. Turkey ga-eku ume anyị Somali ụmụnna. " o kwuru.
Onye isi nchekwa nchekwa nchekwa nke Baykar, Selcuk Bayraktar, sitere na ndekọ mgbasa ozi ọhaneze, kwuru, "Anyị na-ezigara akụrụngwa iku ume ụlọ anyị nke ndị injinia mepụtara na Somalia, mba nke na-enweghị ngwaọrụ. Ọ bụghị nanị na ala ndị a na-ahụ maka teknụzụ. "Olile anya nke ndi nkpagbu nke nmegbu uwa niile."
OLEE AKW STKWAS PRODU EBARA?
N'okpuru nhazi nke ulo oru ulo oru na teknụzụ, n'okpuru isi nke Onye isi ala Erdogan, ndị injinia na-arụ ọrụ n'okpuru Biosys, Baykar, Arçelik na Aselsan, ndị na-arụ ọrụ na mmekorita nke Ministri Ahụike, gosipụtara na ịchụ onwe ya n'ọrụ site na iji mmemme nke usoro Nnwale Mba. Ka anya dị ka otu bịara ọnụ n'ihi na mmepụta nke ngwaọrụ "nke na-eme ego" na-achọ, na-diffucult na ike dị si mba ọzọ, ọbụna mgbe ugboro abụọ na price na-sonye assayed unsent ibu na Turkey nwere vernacularization na a mkpirikpi 2-3 ụbọchị.
N'ajụjụ ọnụ n'ọnwa gara aga, Minista Varank kọwara usoro nrụpụta nke ngwaọrụ dị ka ndị a:
"The virus tupu ya abịa Turkey Prime Minister Recep Tayyip Erdogan ntụziaka, gbalịrị eme ọnụ na Ministry of Health. Agụrụ m akụkọ banyere ọrụ ọrụ injin anyị kwa ụbọchị. Ndị injinia Turkey rụrụ ọrụ ahụ site na nsụhọ nke usoro mgba nke National. Onye ọ bụla n’ime ha rụrụ ọrụ ike n’itinyekwu ihe n’abalị n’ụbọchị. Agụwo m na ngwaahịa ndị siri ike ibubata si mba ofesi, ma ọ bụ jisie ike ịzụta ya na ọnụahịa ahụ okpukpu abụọ, anaghị akọwapụta ya na obere oge dị ka ụbọchị 2-3. Nke a bụ ihe enwere ike ịchụ.
“ANY SA kwuru na anyị nwere ike ịzụlite ngwaahịa”
Ozi anyị nwere ụlọ ọrụ na-azụ ahịa nke nwere ọtụtụ nkwado, akpọrọ Biosys. Anyị ekpebisila ike na ụlọ ọrụ a na-ewepụta akụrụngwa na-ahụ maka iku ume. The pilot larịị na niile 12 nkeji emepụta Turkey na nwere set a na-eji n'ụlọ ọgwụ ụfọdụ. Anyị na ndị enyi anyị kpara nkata ma kwuo, 'Anyị nwere ike ịmepụta ngwaọrụ ndị a n'obodo anyị.' Anyị wee gawa.
“EKWU EGO NIILE”
N'ebe a, ọkachasị Selçuk Bayraktar nke Baykar nwere nkwado dị ukwuu. Anyị nakweere ọrụ a ma anyị arụ ọrụ injinịa maka nrụpụta nnukwu ngwaọrụ. Ka ọ dị ugbu a, anyị kpọtụrụ Arçelik, otu n'ime ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ọma nke obodo anyị. Ha kwenyekwara n’ọrụ a. Maka imepụta nke a ngwa ngwa ma hie nne, a malitere ike ahịrị ma malite imepụta ngwaọrụ n'igwe a.
O nyere akara ya
Anyị mepụtara ngwaọrụ ndị a maka mmadụ. Ọ bụrụ na Onye isi ala anyị hụrụ na ọ dabara adaba, enwere ike ịpụpụ ngwaọrụ a. N'ihi na anyị kwenyere na anyị na-emepụta ngwa ọrụ ụwa.
Minista Varank kọwara nkọwapụta nrụpụta nke onye na - ahụ maka nchekwa ụlọ
General Motors na - enwe nkwekọrịta na CEVA Logistics Maka Management Of Respirator Suppine Chain
Epsilon-NDT na-aga n'ihu n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè ná mba ọzọ
Mmiri Ngwongwo Sunflower Na-aghọ Ụmụ akwụkwọ Adreesị
A mụrụ ndị nọọsụ na Turkey Aghọọ Job Job
Ụgbọala Denizli Cable aghọwo ọhụụ ọhụrụ maka ndị na-eme njem
Adreesị ọhụrụ nke nkà na ndị na-ese ihe nọ na Ankara
Obodo na National akụkụ okuku ume na Equipment na Turkey ga-eku ume Great
İZBAN Ogologo oge na-aga n'ihu na ịmalite nke Line Torbalı
Njem Ulo Azụmaahịa bidoro na Samsun Sivas Kalin Railway Line echi
Dizayn Railway ga-ebupụ ụgbọ okporo ígwè n'èzí
Akwụkwọ New New Depot Address Galata na Istanbul
Adreesị nke mkpa mpaghara dị mkpa
Adresị nke ibleweta Accessnweta KARSAN dị na EYAF N’afọ a